Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, Votarisirwa Kutambira Kudomwa Kwavo Kuti Vakwikwidze Zvakare Musarudzo
Nhengo dzebato reRepublican Party dzakadoma VaTrump pamwe nemutewedzeri wavo, VaMike Pence kuti vakwikwidze musarudzo muna Mbudzi.
Musangano wekudoma achamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica, kana kuti Republican National Convention, wapinda muzuva rechina rinove rekupedzisira vachamirira bato iri musarudzo uye vari mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, vachitarisirwa kupa mashoko avo ekutambira kudomwa kwavo semunhu achamirira bato iri musarudzo.
VaTrump vari kutarisirwa kutaura vari kumuzinda wavo weWhite House.
Vakadomwawo kuti vave mutewedzeri waVaTrump musarudzo iyi, VaMike Pence, neChitatu vakatambirawo kudomwa kwavo kuti vamirire bato iri musarudzo, apo vakapa mashoko avo ekukurudzira veruzhinji kuti vatsigire VaTrump musarudzo.
VaPence vakati VaTrump ndivo chete mutungamiri anokwanisa kuchengetedza nyika yeAmerica, vakashoropodzawo vachamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, VaJoe Biden, vachiti havana chivimbo chekuve mutungamiri wenyika.
Vamwe vakataura neChitatu manheru vanosanganisira mudzimai waVaPence, Amai Karen Pence, VaChen Guangcheng, vanove chizvarwa cheChina (Chaina) chisingaoni,VaJack Brewer, vanove mutema akambotamba mutambo weNFL.
Muroora waVaTrump, Amai Lara Trump, ndemumwe akataurawo, vakati vanhukadzi vane mabhizimusi madiki vari kuramba vakawanda kubva pakapinda VaTrump pachigaro.
Asai chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chiri kuteverawo mafambiro emusangano uyu, VaDen Moyo, vanoti oongororo yavo inoratidza kuti musangano webato reRepublican Party uyu hausi kunyanya kutaura nezvechirwere chedzihwamupengo Coronavirus, icho chanetsa pasi rose, America iri nyika iri pamusoro pahuwandu hwevanhu vabatwa uye kufa nacho.
VaMoyo vanotiwo mashoko evakataura neChitatu aive ekungorumbidza VaTrump, asi pasina vari kutaurawo vachibata nyaya dziri kunetsa muAmerica, dzinosanganisira kukosha kwehupenyu hwevanhu vatema.
Pamashoko avanotarisira kuti achataurwa naVaTrump, VaMoyo vanoti havaoni paine zvitsva pane zvavachataura kunze kwekungozvipembedza kwavagara vachiita.
VaTrmup naVaBiden vari kutarisirwa kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi wegore rino, apo zvizvarwa zveAmerica zvichasarudza mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenhanhatu.